Tsvaga YAKO YEMHURI YEMHURI YOKUTAURA Bhodhi yeForskolin Mutumbi Bhudziro - Kurwisana Kwemagariro
musha » Supplements » Tsvaga YAKO YEMHURI YOKUTAURWA Bhoti yeForskolin Mutumbi Blast
Forskolin Body Blast FREE MUTA
Kutarisa kuderedza ureyi muzhizha? Kana zvakadaro tine nyaya huru kwauri! Kwekanguva kaduku chete, unogona kuwana bhodhoro rekuedza yeForskolin Body Blast.
Kufungisisa kuti hype iri chii pamusoro peForskolin? Heano mamwe mashoko pamusoro peiyo forskolin iri:
Simba rekugadzira simba, forskolin, rinowanikwa mumidzi yemiti ye coleus forskohlii, iyo mishonga yemhuri yeminiti. Vatsvakurudzi vachangobva kuziva izvozvo yakachena forskolin chikwata kunobatsira kuputsa mafuta akakuvadzwa mumuviri pamwe nekuwedzera kuonda kwemisimba. Izvi zvinowedzera mabasa kuvanhu uye vakadzi.
Kusiyana nedzimwe mishonga yezvokudya zvinongopa mhinduro zvenguva pfupi, Forskolin ine nzira yakasiyana-siyana yakagadzirirwa kutakura kuora. Inoshanda pane imwe nhamba yemagetsi kuti isangotanga kuisa mafuta akaomeswa asi inodzivisawo nguva yemberi mafuta. Izvi zvinokubatsira iwe kwete kungorema uremu chete asiwo uhuchengetedze zvachose!